iPhone သို့ပြောင်းရန်အတွက် Apple ဗီဒီယိုလေးခု | အိုင်ဖုန်းသတင်း
iPhone တစ်ခုသို့ပြောင်းရန်သင့်အတွက် Apple ဗီဒီယိုလေးခု
Nacho Aragonés | | iOS ကို
Apple ကထုတ်ဝေသည် သူ၏ယူကျု့ချန်နယ်တွင်ဗီဒီယိုအသစ် ၅ ခု။ ၄ င်းတို့အနက်မှ ၄ ခုသည်၎င်းသည် "ပြောင်းလဲမှု" လှုပ်ရှားမှုမှဖြစ်ပြီးအခြားမိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများကို iPhone ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုရန်စည်းရုံးရန်ရည်ရွယ်သည်။
အရင်ဗွီဒီယိုတွေလိုပဲ၊ သူတို့ဟာတိုတောင်းတဲ့ဗွီဒီယိုဖိုင် format ဖြစ်ပြီး၊ ၁၅ စက္ကန့်လောက်၊ iPhone တစ်ခုတည်းကိုပဲအာရုံစိုက်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တောက်ပတဲ့အရောင်တွေ၊ ရှင်းလင်းတဲ့အယူအဆတွေ၊ ပျော်စရာတွေတောင်ရှိတယ်။
"ပတ်ဝန်းကျင်" - မြေဖို့ရန်အတွက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမပေးပို့သောစက်ရုံများတွင် iPhone ကိုတပ်ဆင်ထားသည်. ကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်သောအခါ“ iPhone သည်ဖုန်ထဲသို့မဝင်ရ” ဟု ပိုမို၍ သွားမည်ဟုထင်ခဲ့သည်၊ အကြောင်းမှာလူတစ်ယောက်သည်မိမိ၏ကော်ဖီကိုအိုင်ဖုန်းintoရိယာထဲသို့ပစ်ရန်ကြိုးစားနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသော်လည်းဖြစ်မလာပါ။ သို့သော်၎င်းကသူတို့၏စက်ရုံများသည်အမှိုက်များကိုစွန့်ပစ်ခြင်းမရှိဟုဆိုလိုသည်။
“ Safe” - စင်ကြယ်သော“ I´ma Mac နှင့် I´ma PC” စတိုင်တွင်၊ Apple က iOS ဘယ်လောက်လုံခြုံမှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည် Android နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့သည်အဓိကအားဖြင့် iPhone သို့ရောက်ရှိသည့်စဉ်ဆက်မပြတ်မွမ်းမံမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။
"Apple Support" - ဤတစ်ကြိမ်တွင် Apple ကသူ့ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုကြွားဝါ ငါသူတို့ကတတ်နိုင်တယ်ထင်တယ်၊ သူတို့ရဲ့ Support app ကိုအမြဲတမ်းရရှိနိုင်တယ်၊ (အထူးသဖြင့်သင့်မှာအာမခံချက်မရှိတဲ့ Apple Care နဲ့ရှိရင်) ဝန်ဆောင်မှုဟာအတော်လေးကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းတယ်။
"ဖြေလျှော့" - သံသယရှိနေဆဲသူများအတွက် - \_ t သင့်ရဲ့သီချင်း၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်အရာအားလုံးကိုသင့် iPhone အသစ်သို့လွှဲပြောင်းရန်မည်မျှလွယ်ကူသည်ကို Apple ကပြသခဲ့သည်။
ဤဗီဒီယိုများသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ဖြစ်သည် "ပွောငျးလဲ"။ ၎င်းတွင် iPhone သို့ပြောင်းရန်စဉ်းစားနေသူမည်သူမဆိုသူတို့၏မေးခွန်းများအတွက်အဖြေများကိုရှာဖွေပြီး၊ သူတို့၏ iPhone အသစ်ကိုဝယ်နိုင်သည်။
ဒီဗီဒီယိုလေးခုအပြင် Apple က iPhone ကိုဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုတဲ့ပဉ္စမဗီဒီယိုကိုထုတ်ဝေလိုက်ပြီ။ ကြောင်းပူးပေါင်းမည် မကြာသေးမီကထုတ်ဝေသောသူတို့အား.
ဗွီဒီယိုအသစ်သည်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၏အရောင်ကိုမည်သို့အကောင်းဆုံးတည်းဖြတ်ရမည်ကိုပြသည်။ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရဗီဒီယိုသည်အလွန်တိုသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အများဆုံးအသုံးပြုသောလုပ်ဆောင်ချက်များအနက်မှသံသယမရှိပါ။ နောက်တဖန် "color" ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်နောက်ထပ်များစွာသော parameters များကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iPhone တစ်ခုသို့ပြောင်းရန်သင့်အတွက် Apple ဗီဒီယိုလေးခု
ဂူဂဲလ်၏ cloud သိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်ကို Apple ကအတည်ပြုသည်
iOS 11.3 ၏တတိယ beta သည် device ဟောင်းများ၏ battery ကိုဖြုန်းတီးပစ်သည်